GNU / Linux ရော၊ Windows ရော၊ OS X တို့မှာ - ငါတချောင်းကိုသုံးလိမ့်မည် Linux မှ
GNU / Linux ရော၊ Windows ရော၊ OS X ရော၊ ငါကတုတ်ကိုသုံးမယ်
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အခြား
ငါ post ကို update လုပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မူရင်းဆောင်းပါးသည် SomosLibres.org မှမဟုတ် MuyLinux from မှဖြစ်သည်
ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသာဖတ်လိုက်သည် အလွန် linux ဘယ်မှာရေးသားသူကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကြည့်ရှုစေသည် GNU / Linux များ ထို့အပြင် NSA ကဖို့နောက်ကျောတံခါးကိုရှိသည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင် Intel ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ Linus Torvalds ကိုယ်တိုင် kernel ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ Linux မှာ - စီးပွားဖြစ်ဒြပ်စင် - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မဖြစ်နိုင်သောတံခါးပိတ်အရင်းအမြစ် - ရှိသည်။ ။ ဤဒြပ်စင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်ကျပန်းနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ထို "ဖြစ်ပျက်သောအရာ" များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ Linux ကို NSA က 'Trojanized' လုပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က Mackall သည် Intel ၏ပံ့ပိုးမှု၏နည်းပညာသာလွန်မှုကိုယုံကြည်သော Torvalds ၏ငြင်းဆန်မှုကြောင့်တိကျစွာနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော် Mackall သည်ဇူလိုင်လတွင်ဖုန်မှုန့်များများပြားလာခြင်းမရှိသောစကားပြောဆိုမှုတွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သက်သေသာဓကမှာလွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် - အကယ်၍ ၎င်းကိုအတည်ပြုပါကပင်ဂွင်းပင်စနစ်ကိုထိုးနှက်လိမ့်မည်။ အဲဒါကိုအတည်မပြုနိုင်သောကြောင့်
ကောင်းပြီ၊ တစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောရမယ်၊ Intel က တစ် ဦး ထားလိုက်ပါတယ် အနောက်တံခါး အရာ Linus Torvalds ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်ပါဝင်သည်သိရသည် kernel အဲဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူး၊
၁၀၀% အခမဲ့ဟုဆိုသောဖြန့်ဝေမှုများသည်ဤကဲ့သို့ kernel တွင်မည်သို့ပါဝင်သနည်း။ သို့မဟုတ်ပါကသူတို့မပါဝင်ပါဘူး?
သင်အမှန်တကယ် Linus ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုခုမှမိမိကိုမိမိချေးငှားနိုင်ထင်ပါသလား
မည်သူမဆိုအတွက်ကျွန်ုပ်၏လက်များကိုမီးမထည့်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဘ ၀ ၌အရာများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်းယခင်ကသတိမပြုမိဘဲဖြစ်ခဲ့သည့်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါဆွေးနွေးငြင်းခုံသင်တို့အဘို့ပွင့်လင်းထားခဲ့ပါ, ငါဘာသာရပ်သို့နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာမလိုချင်ကြဘူး။ ငါ, ဖြစ်စေမဖြစ်စေငါတုတ် (သစ်သား) တဖဲ့အပိုင်းအစဖြတ်တောက်နှင့်အတူငါအလုပ်သွားတော့မည်။ NSA အတွက်အလုပ်လုပ်သောစည်းများရှိမရှိကြည့်ရအောင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » GNU / Linux ရော၊ Windows ရော၊ OS X ရော၊ ငါကတုတ်ကိုသုံးမယ်
184 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
R ကို @ iden ဟုသူကပြောသည်
အဘယ်အရာကိုမျှ, Big Brother သည်သူ၏အမှုကိုပြု။
R @ iden သို့ပြန်သွားပါ
ဒါကြောင့်တစ် ဦး မဟုတ်သလိုအခြားတစ်ခုမျှလွယ်ကူသောပစ်မှတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်
အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောစကားဝှက်ဖြစ်သည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှသေချာစွာမသိနိုင်ပါ၊ NSA မေးခွန်းကြောင့်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အကြောင်းအရာဟောင်းဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုကြည့်ပါ၊ ဤသည်သည် FUD ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်နှင့် "inauditable" ဖြစ်လျှင်၎င်းသည် backdoor တစ်ခုအတိအကျကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်လမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ဤအကြောင်းအရာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ (ဟစ်စပန်းနစ်ဘလော့ဂ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ဖူးသောလူတိုင်းနီးပါး၊ သင်မမှားပါကကျွန်ုပ်မှားကြောင်းမရ) သည်ငှက်ပျောဆောင်းပါးများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမ်၊ ၁၀၀% အခမဲ့ distros များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့သည်ဤအရာသည်ဤအရာကိုမခံစားရသောကြောင့်၎င်းဒြပ်စင်ကိုဖယ်ရှားပြီးအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း (ဖယ်ထုတ်ခြင်း) (၎င်းတွင်မည်သည့်အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသံသယဖြစ်နိုင်သည်) ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအရာအားလုံးကိုမျိုချလိုက်လျှင် "အကြီးအစ်ကို"၊ "မာရ်နတ်"၊ "အင်ပါယာ" သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုသင်သည် kernel-linux-libre ပါသော distro ကို သုံး၍ ထိုစိုးရိမ်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
Bro, ငါမိတ်ဆွေတစ် ဦး အနေဖြင့်သက်သေသာဓကနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုကိုငြင်းခုံခြင်း မှလွဲ၍ သင်ထိုကဲ့သို့သောအနတ္တကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ရရှိမည့်အရာအများစုမှာပုံမှန်စကားများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါဆောင်းပါး၌ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းငါအကြောင်းအရာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမသွားပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း (သို့) မိမိကိုယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအကြောင်းပိုမိုသိရှိပြီးခိုင်မာသောအခြေအမြစ်များနှင့်အငြင်းပွားလိုပါကအငြင်းပွားမှုများကိုပွင့်လင်းစွာထားခဲ့ပါ ။
ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်၊ ငါ FUD လို့ပြောတဲ့အခါ၊ ငါဆိုလိုတာကငါမကြာခင်ကဘလော့ဂ်များနှင့်ကွန်ယက်တွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲဆောင်းပါးကိုယ်တိုင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲတကယ်တော့ငါအရမ်းကိုဂုဏ်ယူသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်မှာသက်သေပြစရာမလိုဘဲဘာမှယူဆရန်မ😉
Javier Orozco ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ အရေးကြီးသည်ဆိုပါကမိမိကိုယ်ကိုအကြောက်လွန်ရောဂါမဖြစ်စေရပါကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်သောကြောင့်၊ ထိန်းချုပ်မှုသည်ကွန်ပျူတာများဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ စာတိုက်၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်းစသည်တို့ခေတ်ကတည်းကဤအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါတို့က ID စာရွက်စာတမ်းနဲ့မွေးလာတာနဲ့ငါတို့အကြွေးဝယ်ကတ်တွေ၊ ဘဏ်စာရင်းတွေသုံးတယ်၊ ငါတို့ကအခွန်တွေပေးကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
Javier Orozco အားစာပြန်ပါ
သင်တစ် ဦး ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်အတွက် backdoor ရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူး။ cryptography ကိုချိုးဖောက်နိုင်ရန်ထိုနံပါတ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အားနည်းချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ကုဒ်၏အပြုအမူကို (ရင်းမြစ်များမရရှိနိုင်လျှင်ပင်) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိသိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်မည်မျှယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဥပမာ - ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ၀ င်ရောက်နိုင်ပုံကိုထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်းသိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဖြိုဖျက်သူမည်သူမဆို၎င်းတွင် stack frame ပြင်ပရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိမရှိသို့မဟုတ်ထိုကုဒ်တစ်ခုတည်းမှမောင်းနှင်ခြင်းမရှိသောမည်သည့်မှတ်ဉာဏ်အပိုင်းကိုမဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းတို့တွင် "ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး" လုံးဝမရှိသင့်ပါ။
IQ နှင့်လူများ၏အသိပညာကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်အဘယ်နေရာတွင်အသနားခံစာကိုစတင်မည်နည်း။ ယောက်ျားများ၊ read driver / char / random.c ။ ထို့နောက် cryptography အကြောင်းလေ့လာပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပြန်လာပြီးသင်မှားတယ်လို့ကမ္ဘာကိုဝန်ခံပါ။ အတိုချုပ်: ငါတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲသိတယ်။ သင်မကျင့်ဘူး အဖြေ (Long) အဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့သည် rdrand အားသွင်းအားစုများစွာ၏ကျပန်းရေကူးကန်အဖြစ် _one_ အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုကျပန်းရေကူးကန်အားတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့် rdrand ကို NSA ကပြန်လုပ်ပေးရင်တောင်ငါတို့ rdrand ကိုအသုံးပြုခြင်းက / dev / random ကနေရရှိတဲ့ကျပန်းနံပါတ်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ အတိုချုပ်အဖြေ - မင်းဟာမသိနားမလည်သူပါ။
ငါ "rdrand back-door ရှိရင်တောင်မှ" လို့ပြောရင် back-door မဟုတ်ဘဲအားနည်းချက်ကိုဖော်ပြတယ်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်က FUD ဖြစ်ပါတယ်။
လေးသမားများသည် San Ignucio debiangel ကိုလိုက်လိုလျှင် Parabola GNU / Linux-Libre ကိုသွင်းပါ။
ကျေးဇူးမရှိပါ၊ ကျွန်တော်သွားမှာပါ ငါ Trisquel တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၂ နာရီလောက်ကြာတယ် ငါအဲဒီအချိန်တုန်းကငါ့မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ခဲ့တဲ့ bcm4312 ကိုငါမရနိုင်ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကအဲဒါကိုမွမ်းမံလိုက်တယ်
Broadcom မှာ propietary driver တွေပဲရှိတယ်။ ငါက xD ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ၁၀ ဒေါ်လာတန်တဲ့ atheros xd chip နဲ့ usb wifi skewer ကို ၀ ယ်ဖို့အမြဲတမ်းအကြံဥာဏ်ပေးတယ်။
နာရီဝက်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ') ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ကဒါကိုကြည့်နေရင်းအဲဒါကိုလုပ်ဖို့တစ်ခုခုမဝယ်သင့်ဘူး။
တကယ်တော့ Arch ကိုမသုံးပဲ Parable အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါပြီ
ဘာပိုဆိုးတာလဲ OpenBSD တွင် binary blobs မရှိပါ၊ ကုဒ်သည်စစ်ဆေးမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နေ့စဉ်သုံးရန် OpenBSD ကိုသင်အလေးအနက်ထားမည်လား။
ကောင်းပြီ၊ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ OpenBSD သည်အလုပ်မလုပ်ဟုမဆိုနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်၎င်းတွင် Linux တွင်မရှိသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux OpenBSD ကိုဤ al အတွက်သာမထားခဲ့ပါ၊ အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်မည်သည့်စနစ်ရှိနေသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ privacy သည်ငရဲသို့သွားသည်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကရှည်လျားပေမယ့် FSFLA ရဲ့ "Linux-libre" ဗားရှင်း (မေးခွန်းတခုရှိတယ်) http://www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/ ) မည်သည့် Binary Blob မပါ ၀ င်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Vanilla Kernel တွင်လူကြိုက်များသောဖြန့်ဝေမှုများတွင်၊ WiFi driver, ဂရပ်ဖစ်၊ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုပါ ၀ င်သည်။ ။
၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများအဖြစ်ယူနိုင်သည့်အရာများစာရင်းရှည်ကြီးတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ထုတ်ဝေရမလဲဆိုတာကျွန်ုပ်မသိသေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုပ်သည်နှင့်အမြန်လင့်ခ်တွင်ဤနေရာ၌မှတ်ချက်ပေးပါမည်။ ၎င်းသည်အခြေခံကျသော Kernel အကြောင်းသာမဟုတ်ပါ။ (အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ OpenBSD ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာ၎င်း၏အခြေခံစနစ်အတွင်းမည်သည့် binary blog ကိုမျှလက်မခံပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှအလုံခြုံဆုံးစနစ်ဟုယူဆနိုင်သည်။ )
ကျွန်ုပ်သည်အကြောက်လွန်ရောဂါမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လုံခြုံစိတ်ချရသောထိုအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများစွာရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထိခိုက်မခံသောပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောသီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်အစွန်းရောက်အစွန်းရောက်ဝါဒကိုလက်လှမ်းမမှီဘဲအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ ခုခံကာကွယ်ဖို့။
အဲ့တာမှန်တယ်။ ထို့အပြင် privacy ကိုအတိအကျမဟုတ်ဘဲအဆင်ပြေစေရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ blobs ဖြင့် distros များကိုသုံးသော GNU / Linux အသုံးပြုသူများစွာလည်းရှိသည်။
တကယ်တော့၊ ငါ Parabola GNU / Linux-libre ကို ၂ ရက်လောက်သုံးပြီးဘာမှမလွတ်သွားဘူး။ Gnash နဲ့ပုံမှန်အားဖြင့် flash ကိုတွေ့တယ်။ အခမဲ့ဒရိုင်ဘာတွေကပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါမစဉ်းစားတော့ဘူးဆိုရင်ငါထင်တယ် ငါဘဝတစ်လျှောက်လုံး၏ Arch ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်များစွာမပြသပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ system ထဲရှိ plugins, addons, extras (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သောသုံးစွဲသူအမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ vanilla ကိုစွန့်လွှတ်သည်။ "အသုံးဝင်သော, ရိုးရှင်းသော) ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် gnash ၏တိုးတက်မှုကိုသတိမပြုမိသောကြောင့် Flash 11 ကိုအသုံးပြုသည့်စနစ်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောစည်းကမ်းချက်များအရ၎င်း၏တိုးတက်မှုအပြင် gnash သည်အမှန်တကယ်စိတ်အညစ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး Arch ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်၊ ပြီးတော့ Parabola ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာမယ်။
အပလီကေးရှင်းတွေမှာတော့ငါတို့အတူတူပါပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပဲ။ ငါကထူးဆန်းတဲ့ဂိမ်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်။ ပြီးတော့ desktop environment တစ်ခုမအောင်မြင်ရင်နောက်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလိုက်မယ်။
ကောင်းပြီ၊ သင်ကြိုက်လျှင်၊ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဒီနေရာကိုထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ 😉
အိုကေ၊ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်ပို့မယ်၊ redactalo.com ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ကိုဒီလမ်းညွှန်လိုပဲထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ http://redactalo.com/27/guia-de-arch-linux-%28tutorial-de-instalacion-configuracion-etc%29-%282013%29/ ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပြင်ဆင်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်သောဖိုရမ်များတွင်အမှားအယွင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးထားရှိသောကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သောပထမမူရင်း၏ backup ကိုခရီးသွားခြင်းနှင့် အချိန်မရှိခြင်း၊ ဆောင်းပါးများကိုဆက်လက်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်အားလျော့သွားပြီးကျွန်ုပ်သည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ် ဦး ဖြစ်သည့် FB ရှိအဖွဲ့ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်သာအာရုံစိုက်ခဲ့သည် (Free Society for Free Software) https://www.facebook.com/groups/linuxparatodos
SL အကြောင်းပြောဆိုသောစပိန်ဘာသာစကားတွင်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်ကိုယုံမှားစရာမရှိစေဘဲ DL အတွက်အထောက်အကူပြုသည်
ကျနော်တို့ GNU / Hurd နှင့်အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသုံးပါလိမ့်မယ်
Hardware ကောင်းတဲ့နေရာမှာ NAS code ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကယ်တင်သလဲ
SELinux ဖော်ပြရန်မ။ GSA code ဖြင့် NSA မှဖန်တီးသည်။ ဒါကအခမဲ့ kernel ကို၌တည်ရှိ၏။
နောက်ဆုံးတော့လယ်ကွင်းကိုပြန်လာပြီးလယ်သမားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝအကြောင်းကိုမေ့လျော့လိမ့်မယ်, ငါတို့ Analog ဖြစ်ခြင်းပြန်သွားပါလိမ့်မယ် !! hehehe !!
Josué Botella ကိုပြန်ကြားပါ
သူတို့က Stallman ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ထားရင်သူတို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ဘူး၊ အဲ့ဒီမီးကိုလောင်ကျွမ်းစေတာမတန်ဘူး (Diazepan နဲ့ Pandev တို့တောင်မှငါနဲ့ Somoslibres ပေါ်မှာအဲဒီဆောင်းပါးကိုရေးတဲ့သူကငါ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့မီးတောက်တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမှန်းတောင်သိတယ်။ org) ။
အမှန်တရားကတော့ FSF ကအကြံပြုထားတဲ့ software ကိုတကယ်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်စီးပွားဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုင်ဆိုင်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ Leemote လက်တော့ပ်များသို့မဟုတ် Rasperry Pi ကဲ့သို့သောအခမဲ့ hardware ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ Trisquel သို့မဟုတ် Parabola ကဲ့သို့သောအခမဲ့ distro အသုံးပြုသူများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။ FSF ၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအဆုံးတွင် Debian ၏သဘောသဘာဝကိုမျှဝေသည်။
OpenBSD ကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါက UNIX ၏တိုက်ရိုက်ကလေးကိုသင်အသုံးပြုရန်သင်ယူပါလိမ့်မည်။
သင်တစ် ဦး ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်အတွက် backdoor မဝင်နိုင်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ crypto ကိုချိုးဖျက်ရန်ထိုနံပါတ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်အားနည်းချက်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသိပညာထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုကုဒ်မပါဘဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
ဘရူနို Cascio ဟုသူကပြောသည်
Louse ကိုသတိထားပါ၊ အဲဒါဟာ hardware မဟုတ်ဘဲ software ပဲ။ ငါတစ်ခုခုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမဟောရဲတော့ဘူး။
Bruno Cascio သို့ပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒါဟာဆော့ဝဲလ်ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် (သင်ကုဒ်မရှိသောကြောင့်) binary ကိုမဖြုတ်လိုက်ရင်သူက stack frame အပြင်မှာဒါမှမဟုတ် code ကမောင်းနှင်မထားတဲ့ memory segment အပြင်ဘက်မှာသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့်သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းတို့တွင် "ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး" လုံးဝမရှိသင့်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ သူတို့ကအဲဒီမှာ backdoor တစ်ခုထားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဆိုနိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားသင့်တယ်။
Debian / Hurd၊ Debian / kfreeBSD သို့မဟုတ် Arch / Hurd သို့သင်ကြားပို့ချခြင်း ..
Arch / Hurd နေဆဲ? ငါ systemd ဖို့ပြောင်းရွှေ့နှင့်အတူစီမံကိန်းသေလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့တယ်။
ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်၏ backdoor သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအချက်အလက်များကိုပုံရသည်။
ကျပန်းနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ၏မိုက်ခရိုကုဒ်များပါလျှင်အန is တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော်လည်းပုံမှန်အကြောက်လွန်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ထိုအရာကိုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါသိသောခေတ်သစ်ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်များသည် Die Hard စမ်းသပ်မှုများကိုဖြတ်သန်းသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သောကျပန်းနံပါတ်တစ်မျိုးသည်နှာခေါင်းကိုလှည့်စားရန်လိုအပ်သည်။
ငါအရာအားလုံးမထားခဲ့ဘူး, ငါဒီခေါင်းစဉ်မှာကျွမ်းကျင်မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကို, esdebian ထံမှဤမှတ်ချက်ကိုရတယ်။
ပြောသူတစ် ဦး လိုပဲ။
Cost Granda အားပြန်ကြားပါ
၁၀၀% အခမဲ့ distros များသည် vanilla kernel ကိုမသုံးပါ၊ ၎င်းတို့သည် free linux ကိုသုံးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ထဲတွင်ပါဝင်မှုမရှိပါ။
၎င်းသည်အချို့ကို kernel ထဲထည့်ရန် Linux ကသူ့ဟာသူငှားရမ်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၁၀၀% ပါ ၀ င်သည်။ ငါရှင်းပြတယ်
ဥပမာအားဖြင့်၊ cryptographic သော့အသစ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသောကျပန်းနံပါတ်မီးစက်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
1.- software ကို algorithm ကိုအကောင်အထည်ဖော်။ ဖတ်ချင်တဲ့သူတိုင်းကြည့်နိုင်တဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ။
2.- ဒီအလုပ်အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ Intel chip ကို (ဟာ့ဒ်ဝဲ) ကိုသုံးပါ။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာဤအချက်မှာဤ Mackall သည်၎င်း chip ကိုဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုမယုံသောကြောင့်ဆော့ဖ်ဝဲအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုရွေးချယ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Linus ကအထူးပြုလုပ်ထားသောချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ထို့ကြောင့် NSA နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများအရ Intel သည်ကျပန်းနံပါတ်များကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Intel chips များ၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံသော cryptographic keys နှင့် encryption system များသည်အားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။
သို့သော်အမှန်တကယ်တွင်တံခါးသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမဟုတ်သောဟာ့ဒ်ဝဲဖြစ်သည်။ Android အတွက် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်အားလုံးသည်ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်မအောင်မြင်သောကြောင့်တိကျသေချာစွာအားနည်းချက်ရှိကြောင်းမကြာသေးမီကပင်သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် Google က၎င်းကိုပြင်ဆင်သည်။
Man, ဒီပြrandomနာဟာအစအ ဦး မှာ iphone မှာဖြစ်ခဲ့တာလား iTunes မှာသူတို့ကအသုံးပြုသူကျပန်းစာရင်းကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကကျပန်းစာရင်းတစ်ခုရတယ်။
သို့သော်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းသည်ကျပန်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တူညီသောသီချင်းသည်အကြိမ်များစွာပေါ်ပေါက်ကြောင်း၊ အခြားသူများကမူ 3h အတွက်လိုချင်သောအရာမဟုတ်ကြောင်း ... စတင်ခဲ့ကြခြင်းမှာ xD ကျပန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အက်ပဲလ်သည်ထိုပရိုဂရမ်ကိုကျပန်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးစေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် client ကို၏အမြင်၌ပိုမိုကျပန်းကျပန်းစာရင်း။
Linus Torvalds တုံ့ပြန်သည်
OMG .. အမြဲတမ်းဒီတော့တုံး! 😀
အခုလာကြည့်ပါ ဦး ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါဘာကြောင့်မှတ်ချက်တွေကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာတူညီတဲ့အတိုင်းပြသတာလဲဆိုတာကိုယခုသင်နားလည်ပါသလား။ ; ဒီ post ကိုမှတ်ချက်ပေးသူအများစုဟာ Linus Torvalds ရဲ့ဒီအဖြေကိုမဖတ်ရသေးဘူး၊ သူတို့အကြောင်းသိပ်မသိရတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရယ်စရာကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဆက်ပြောနေတယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအထူးသတင်း "သတင်း" ပေါ်ထွက်လာသောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်မိသည်၊ ၎င်းသည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုထက် "snowdenmania" ထက်ပိုမိုသည်ဟုထင်မြင်ရပြီး၎င်းသည်ယခုခေတ်မီနေပြီးအေးလွန်းသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပါသည် NSA (သို့) အခြားအက္ခရာသုံးလုံးအတိုကောက်အားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ အစိုးရများအားလုံးကသူတို့၏စွမ်းရည် (နည်းပညာနှင့်ဘဏ္financialာရေး) ကိုအကောင်းဆုံး (သို့) ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရန်ငြင်းဆန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကျပန်းနံပါတ်မီးစက်ကိုစိုးရိမ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ Kaspersky ဆော့ဝဲလ်၏ကုဒ်ကြောင့်အသုံးပြုသော (များသောအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော) router များနှင့် switch မ်ား၏ပိတ်ထားသော firmware များ (သို့မဟုတ်အများစုမှာ ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများအတွက်) ကိုမစိုးရိမ်ပါ။ "ဟောင်းများ" KGB အေးဂျင့်နှင့်ပူတင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ်ဆွေ) ဥပမာနှစ်ခုကိုပေးရုံပဲ ... လာကြပြီလူကြီးလူကောင်းလေးနက်ကြပါစို့ နာဆာကသင့်ကိုစက်ရုပ်များစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမပြုမီ ...
Hahaha တစ် CAPO ။
_genuinely_ ပြေးတဲ့သူတွေနဲ့ပြheadsနာကသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြproblemနာကသူတို့ဘာသာရပ်မှာမပါ ၀ င်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးခြိမ်းခြောက်နေတာပါ။
ကံကောင်းတာက Linus လိုလူတွေရှိတယ်။ hyper smart, လက်တွေ့ကျတဲ့, အသိအမှတ်ပြု trolls နှင့် idiocy များအတွက်သုညသည်းခံစိတ်။
ဒါကလုံးဝမှန်ပါတယ် ထို့အပြင်လူတိုင်းတွင်အမြဲတမ်းမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနှင့်သင်အမှန်တရားမှာ fanboys များစွာရှိသည်ကိုသင်လေ့လာရပါမည်။
၁၀၀% အခမဲ့ဟုဆိုသောဖြန့်ဝေမှုများသည်ဤကဲ့သို့ kernel တွင်မည်သို့ပါဝင်သနည်း။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမပါဝင်သည်မဟုတ်လော "
၁၀၀% အခမဲ့ဖြန့်ဝေမှုများသည်အခမဲ့ Linux ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဖြစ်နိုင်သည့်တံခါးသည် Linux ၏စီးပွားဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြန့်ဝေမှု၌ဤပြproblemနာမရှိပါ။ အံဆွဲသည်
Dark Purple သို့ပြန်သွားပါ
အမှန်စင်စစ် Blag၊ Parabola နှင့်ဆင်တူသောဖြန့်ချီမှုများသည် blob-free kernel ကိုအသုံးပြုသည်။
ကောင်းပြီ၊ ယခုသတင်းဟောင်းဖြစ်သည်။ သူသည် kernel တွင်တည်ရှိမှုကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မစ္စတာလင်းနပ်စ်ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏တန်ဖိုးများကိုပေးသည်နှင့်သူတို့သည်သင့်ကိုသူလျှိုလုပ်လိုလျှင်၊ ၎င်းကို hardware, skipping, kernels နှင့် OS တို့မှလည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ DNS ကိုထောက်ပံ့သောနှင့်…၏စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်သောဆာဗာများဖြစ်သော internet ၏ကျောရိုး - မှတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့! သင်မှန်းဆခဲ့တယ်
ယခုပင်သင်တို့အားလုံးသည်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်နယူးယော့ခ်ျခံစားခဲ့ရသည့်တူညီသောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနေကြရသည်။ သူတို့သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်များပြားလှသောတိုက်ခိုက်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါထက်သူတို့၏ ဦး ခေါင်းနှင့် ပို၍ ဆင်ခြင်ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးဖတ်သည်။
စာမူကိုတင်ထားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ -
gringoland တွင်သူတို့သည်တိရစ္ဆာန်များ၊ စိတ်မကောင်းခြင်း၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကြမ်းဖက်ခြင်းများ၊ စစ်ပွဲများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အလားတူအဖြစ်ဆိုးများကိုကိုင်တွယ်သည်။
ဤအတောအတွင်းလက်တင်အမေရိကရှိတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့အားအကြမ်းဖက်မှုအကြောင်းပြောပါကကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကျွန်ုပ်ကိုအနတ္တမပေးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်” ဟူသောစကားဖြင့်၎င်းကိုထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ အကြမ်းဖက်လုယက်မှုများ၊ မုဒိမ်းမှုများ၊ ပြန်ပေးဆွဲမှုများ၊ ပစ်ခတ်မှုများ၊ လမ်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ သည်းမခံမှုများ၊ blah blah blah
ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ရလဒ်သည်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဒေသတွင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်မူကားနွားမများကဲ့သို့သတ်ဖြတ်ရာအိမ်သို့ ဦး တည်လိုသောအထူးသဖြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားကိုရည်ရွယ်သည်။
3 …2… 1 …။
သငျသညျဗင်နီဇွဲလားသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ထုနယ်ချဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ, လုပ်ကြံခံရနှင့် လိင်တံမြှောက် အခြားအရာများ😉
ပိုမှန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းသည် Mac မှသို့မဟုတ် Windows မှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (အိုးခဏ!)။
ငါထင်တာကတော့ငါဟာ PC ကိုဖြတ်ပြီး abacus ကိုပြန်သွားတော့မယ်
ဒါက .. 😀
ဒါမှမဟုတ်လက်သည်းကိုအသားအရေနဲ့ကိုက်တာကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ။ shit ကိုမစားခင်မှာဖတ်ပါ။
စမတ်ကျသောအဖြေမှာဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေမရှိနိုင်ပါ။ မည်သည့်စာရင်းစစ်မှုတွင်မဆိုပိတ်ထားသည့်ကုဒ်တစ်ခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟုတ်သည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဟုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။
အားလုံးကိုအခမဲ့ BSD နှုတ်ဆက်သို့ linux XD သို့သွားကြပါစို့
အိုင်ဗင် Fuentes ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းသည်စာမျက်နှာ၏ moderator များကိုအနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာရပ်နှင့်အသုံးပြုသူအချို့၏တုန့်ပြန်မှုအကြောင်းရေးသားထားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုထားခဲ့ပါ။
Ivan Fuentes အားပြန်ပြောပါ
😀မှန်ပါသည်။ သို့သော် Laptop တွင် Wi-Fi ရှိပြီး၎င်းကို၎င်းကိုသက်ဝင်စေနိုင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသဘောပေါက်ခြင်းမရှိစေရန်ပါဝါ LED ကိုပထမဆုံးပိတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ privacy xDD သို့နှုတ်ဆက်သည်။
ကျပန်းနံပါတ်ထုတ်လုပ်သည့်အရာအတွက် Linux ၏အဖြေကိုစစ်ဆေးပါ။
"အတိုချုပ်အဖြေ - မင်းမသိဘူးလား"
ကီဗင် Maschke ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဒါက Linus ရဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့အဖြေတစ်ခုပါ။
Kevin Maschke အားပြန်ပြောပါ
အဘယ်ကြောင့်ကြာရှည်ခံသနည်း သူသည်အဘယ်ကြောင့်နောက်ကျော patting နှင့်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်သည်မဟုတ်လော
Linus rulez ။
ကျွန်တော့် Linus ကိုကြည့်ပါ။ ဒါကတကယ့် hpd လို့ထင်ရပေမယ့်ဒီကိစ္စမှာသူ့ကိုအလွန်လေးနက်တဲ့စွပ်စွဲချက်တစ်ခုလို့စွပ်စွဲနေကြတယ်။ အဖြေမှာလုံးဝကြမ်းတမ်းပုံမပေါ်ပါ။
HDP သည်ဖင်လန်ဘာသာစကားဖြင့်မိခင်ကိုဖော်ပြသည်။ မည်သူမျှ (ဘာမှမပြော) ပါ။ သို့သော်သင်စပိန်ဘာသာနှင့်အခြားဖိုရမ်တွင်ပြုလုပ်ပါကအုပ်ချုပ်သူများနှင့် mods များကသင်၏ခေါင်းကိုဖယ်ထားကြသည်။
တကယ်တော့ကျပန်းနံပါတ်မီးစက်ကစီးပွားဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမှန်ကန်တဲ့နံပါတ်တွေဘယ်လိုထုတ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတစ်ခုခုကိုဘယ်လို decipher လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် NSA က Intel ကိုကောင်းကောင်းမေးခဲ့တယ်။ သူတို့မှာသော့အားလုံး (ကျပန်းစာဝှက်စနစ်နံပါတ်များ) ရှိသောကြောင့်ဘာမှမ decrypt လုပ်နိုင်သည်။
ဒီ backdoor ရှိရင် "Intel" HW မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ Linux သည် AMD, Power, ARM, များစွာသောဗိသုကာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်архитектура bug (နှင့်များစွာသောများစွာသော) အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် "ပြaticနာရှိသော" ကုဒ်ကိုဝန်းရံ / ရှောင်ရှားရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
ကောင်းတဲ့ Linus အဖြေ, ငါမမြင်သေးဘူး🙂🙂 http://www.change.org/en-GB/petitions/linus-torvalds-remove-rdrand-from-dev-random-4/responses/9066
TV ရှိ xd တွင် "မသိကြဘဲစကားပြောကြစို့" ဟူသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှ Linux ရှိနောက်ကျော၏ဤပြissueနာများသည်ပုံရသည်
သူတို့ကသင့်ကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုပါစို့။ သင်က Bradley Manning လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ဆွဲအိတ်ကိုယူပြီး၊ အထူးသဖြင့် NSA ဖြစ်တာမို့ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ Linux code ကိုဤကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာရှိလူအများကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်၎င်း code ကိုမြင်တွေ့သင့်သည်။
ဟွမ် ဆန်တီယာဂို ဟုသူကပြောသည်
အတည်ပြုပြီးပါကကုဒ်အပိုင်းအစကိုဖတ်။ မပြုပြင်နိုင်ပါကဖျက်ပစ်နိုင်ပါသလား။ ပြီးတော့ပြtheနာကသိပ်မဆိုးဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့ intel ကိုငါတို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်။
Juan Santiago အားပြန်ပြောပါ
ဖာနန်ဒို Mumbach ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အခွင့်အလမ်းယူလိုခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ရေးသားချက်များကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း၊ ဤစာမျက်နှာ၏ဘလော့ဂ်များ၏ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဤစာမူသည်လုံးဝလုံးဝမရှိတော့ကြောင်းတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့် NSA သတင်းများမှထုတ်လွှင့်သောသတင်းများအပေါ်အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိသည့်ဇာတ်လမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုမဖြစ်ခင်အမှန်တကယ်သိသောလူများ၏စကားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာစောင့်ကြည့်သင့်သည်။ ဒီလိုမျိုးပျော့ပျောင်းတာကိုမလုပ်ခင် Linus ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်လို့ငါလည်းထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေးဒီငါ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ငါ့ကိုဆက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းချုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ငါကြိုးစားမယ်၊ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် kernel ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်ရှိသေးတယ်။
/ dev / random ဆိုတာဘာလဲ။
/ dev / random သည်အမျိုးမျိုးသောအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျပန်းတန်ဖိုးများ၏မီးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည် intel ကုဒ်ကိုကျပန်းတန်ဖိုးများရရှိရန်အမှန်အကန်အသုံးပြုသည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ "ကုဒ်" ကိုဖြည့်ရန်အခြားအချက်များလည်းရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျပန်းတန်ဖိုးများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ၎င်းသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
- Hard Disk ရေးသားခြင်း / ဖတ်ခြင်း
- ငါနားလည်သော Intel ချစ်ပ်သည်နာရီရရှိသောလက်ရှိအပြောင်းအလဲများအပေါ်အခြေခံသည် (ကျွန်ုပ်ဒါကိုသေချာမသိပါ) ။
ဒါပေမယ့်ဟေ့၊ Intel ကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုဒ်တွေကို kernel ထဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။
- တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျပန်းတန်ဖိုးများကိုရယူရန်အခြားနည်းလမ်းများအားလုံးကိုပိတ်ထားသည်မှ လွဲ၍ ကျပန်းဖြင့်ပြုလုပ်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုတားဆီးမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
က) / dev / ကျပန်းကသင်၏ "entropy" ရေကူးကန်ကို load လုပ်ဖို့အများကြီးပိုကြာမှာဖြစ်ပြီး
ခ) ဟာ့ဒ်ဝဲကို intel ထုတ်ကုန်များနှင့်သာကန့်သတ်လိမ့်မည်
- မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှအမြတ်အစွန်းမရရှိနိုင်သောကြောင့် Intel ကဤအရာကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားမည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။
- လိုင်း 787 တွင် disk မှ entropy ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
- လိုင်း ၆၆ မှ ၇၆ မှ entropy ရရှိရန်နည်းလမ်းများကိုရှင်းပြထားသည်။
ဖာနန်ဒို Mumbach အားတုံ့ပြန်ပါ
သို့သော်လိုင်း ၁၀၆၄ တွင် NSA မှပြန်လည်တံခါးပေါက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသတိပေးသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါလည်းဒါကိုကြားဖူးတယ်၊ ဒါက Linus ရဲ့အမှားပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဇာတ်လမ်းကရိုးရှင်းတယ်၊ သင့် GNU ရဲ့ kernel ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ တစ်ခုရှိလျှင်တံခါးက GNU မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် Linux မှဖြစ်သည်။ ဒီတော့မင်းမှာတခြား Core နှစ်ခုရှိတယ်။
၎င်းသည်ဝတ်စုံ၏သင်္ကေတမဟုတ်ပါ၊ ယခုသင်ကျပန်းဝတ်စုံတစ်ခုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိပြီဖြစ်သည်။ (?)
ပထမအချက်မှာ elav ဆိုသောဆောင်းပါးသည် MuyLinux မှဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကူးခဲ့သောပေါ်တူဂီမဟုတ်ပါ။ သတင်း၏မူလရင်းမြစ် (အမှား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း) နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲပိုမိုဆိုးရွားသည့်အချက်မှာ၊ ငါထားကြပြီများစွာသောကိုးကား။
သင်၏မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပထမမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကမေးသည်၊ ဒုတိယသည်သင်ပိုမိုမေးမြန်းခြင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးသင်သိသောသူထံမှအရေးကြီးသောရှင်းပြချက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Linus ဟာဘာမှမချေးဘူးလို့မထင်ပါနဲ့၊ ဒါပေမဲ့ဒီယူဆချက်ကိုနားလည်ဖို့မလိုပါဘူး။
SeamosLibres.org သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ "Freedom" မိန့်ခွန်းနဲ့ပြောတာထက်လွဲမှားစွာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ MetalByte ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် MuyLinux မှာဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရရင်၊ ပြproblemနာမရှိဘဲမင်းကိုကိုးကားလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် font ကိုအခုငါပြောင်းလိုက်ပြီ။ 😉
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမဖြစ်၊ အပြောင်းအလဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉သို့သော်အလွန်ဆိုးရွားသောနေရာဖြစ်သော SomosLibres ...
ကောင်းပြီ၊ သင်ဟာဆားစေ့နဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုယူနေတယ်။ ထိုအရာရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် အမဲချိတ် Linux Kernel ၏၊ ၎င်းသည်၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုကလုံးဝ Parabola အသုံးပြုတဲ့ free kernel ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအတွက်အဓိကထားသည့် Linux ဖြန့်ဝေမှုများကိုသုံးရန်တတိယနေရာပင်ရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ Fedora ဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်ဆုံးမှာ Gentoo ဖြစ်သည်။
ယခု မှစ၍ စ၍ ငါဆိုသည်ကား၊ လုံခြုံရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ Ubuntu မိသားစုမှမည်သည့်အရာကိုမဆိုမသုံးသင့်ဟုငါဆို၏ စပိုင်ဝဲ.
Torvalds သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဟုတ်ကဲ့ပြောပါလိမ့်မည်။ သူဟာကွန်ပျူတာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ မစ္စတာ Stallman အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။ Linux သည် operating system ၏ kernel တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုနျူကလိယကောင်းစွာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
၄ င်းတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှု (သို့) လုံခြုံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူများကိုအသုံးပြုမည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက http://prism-break.org ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသိသူများမှပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးအရာများဖြစ်သည် ငါထက်အများကြီးပို ဘာသာရပ်အပေါ်
ကောင်းပြီ၊ ငါ Debian ကိုသုံးနေတယ်။ ကောင်းသောအရာ Arch dethroned ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ Arch သည်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်နှင့် Debian ကိုဒုတိယနေရာတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ Debian သည် Prism-break အတွက်အကြံပြုထားသော OS များစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။
Linux-libre ရှိပြီးသားဆိုရင် fork ကိုဘာကြောင့်ဖန်တီးရတာလဲ။ သူတို့အတူတူဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။
* buntu တွင် spyware ရှိသည်ဟုသင်ဘာပြောသနည်း။
နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်း, ဒီကျပန်းနံပါတ်မီးစက်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လို free linux မှာလုပ်လဲ။
free linux သည်မည်သည့်စီးပွားဖြစ် module ကိုမဆို kernel မှဖယ်ရှားသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကအချက်အလက်များကို encrypt လုပ်ရန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုသောကျပန်းနံပါတ်မီးစက်ကိုဖယ်ရှားပါက၎င်းတို့ကိုမည်သို့စာဝှက်မည်နည်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင် pc ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုသင်အားနည်းစေပါသလား။ ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ???
လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကတွေးတောဆင်ခြင်သောအခါငါ stallman သည်မှန်ကန်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်၊ သို့သော်သူ၏အကြံဥာဏ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုအသုံးချပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဒေါ်လာသုံးစွဲပြီးစက်၏ထက်ဝက်ကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ, ငါအကြံပြုသည် အမဲချိတ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသတင်းဟာအဝေးမှစစ်မှန်တဲ့အမှန်တကယ် kernel ထဲမှာပါ ၀ င်နေတဲ့ကုဒ်ကိုတကယ်ထည့်လိုက်ရင်သွားဖို့လမ်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလွန်သံသယဝင်မိပါတယ်။
Ubuntu ၏ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျမိသားစုတွင် Spyware ရှိကြောင်း Prism Break မှ (ကျွန်ုပ်၏ယခင်ထင်မြင်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုကြည့်ပါ) ရရှိသည်။ ထိုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဟက်ကာများသည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသေးစိတ်ရှာဖွေလေ့လာခြင်း၊ အသုံးပြုရန်နှင့်မည်သို့အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းအကြံပြုချက်များပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် Ubuntu တွင် Spyware ရှိသည်ဟုသက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။
သတိထားပါ၊ Chrome browser တွင်၎င်းတွင်ပါရှိသည်။
ဒါပေမယ့် NSA နဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိုဘယ်လိုစွဲလမ်းနေတာလဲ…အကြွေးမထားဘူး၊ သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့မြင်ခွင့်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်၊ သူတို့လိုချင်ရင်ကျွန်တော်သူတို့အတွက် TeamViewer ကို install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(ကမ္ဘာ၏မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှု၏ကန့်သတ်ချက်များ) သည်ဤသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောလည်ပတ်မှုစနစ်ထက် ပို၍ မှားယွင်းနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောသူများသည်မှတ်ချက်များ။
ငါလုံးဝသဘောတူသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်သူတို့ထံမှဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုစူးစမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်မစိတ်ဝင်စားပါ။
အလွန်ကျယ်ပြန့်သော 1st နှင့်ဗွေဆော်။
၂။ ဘယ်သူမှမယုံဘူးဆိုတာသင်သဘောတူပါကသင်၊ သင်ညီမများ၊ ဇနီးများဘာမှမလုပ်သည်ကိုသေချာစေရန်သင့်ရေချိုးခန်းတွင်ကင်မရာများတပ်ထားပါ။ (ငါချဲ့ကားပြောဆိုနေသလား။ ငါတို့အခန်းထဲမှာရှိသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိဝက်ဘ်ကင်မရာများကိုသတိရပါ၊ သူတို့သည်အလွယ်တကူအဝေးသို့သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်)
သူလျှိုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရှောင်ရှားနိုင်ပါ (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သူလျှိုပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည်သက်သေပြပြီးသားအချက်ဖြစ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုထောက်ခံသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ကျင့်ဝတ်၊ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ သမာဓိရှိနှင့်ပိုပြီးများစွာသောအရာ။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမလုပ်သင့်သည်မှာအလွန်ဆွေမျိုးဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် mp3 သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မ ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်သည်။ ဒေါ်လာနှင့်ရာထောင်ချီသောဒေါ်လာအနည်းငယ်သောအငြင်းပွားဖွယ်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်သင်စိုးရိမ်သင့်သည်။
mmm ... ကောင်းပြီငါတို့ Linus ကိုနည်းနည်းပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်မဖတ်နိုင်တဲ့ code ကိုမယုံကြည်သင့်ဘူး၊ သူ့နေရာမှာဘယ်သူမှလျှို့ဝှက်ကုဒ်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြဖို့အသိဥာဏ်ရှိတဲ့နည်းကိုရှာလိမ့်မယ်။ သူsurelyကန်အမှန်တိတ်ဆိတ်စွာနေမည်ဟုအသိဉာဏ်နှင့်အသုံးဝင်သောဘာမှမပြောပါနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်တုတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ် ...
ငါသိသလောက်အတိုင်း ၁၀၀% အခမဲ့ဖြန့်ကြက်မှုတွင်လုံးဝမပါ ၀ င်ပါ။ အဘယ်သူ၏ကုဒ်မှမရနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်လိုင်စင်အနည်းဆုံးခွင့်ပြုသည်
အနည်းဆုံး Parabola GNU / Linux-Libre သည် Debian ကဲ့သို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယခင်က GNU / Linux-Libre kernel နှင့် Debian ဘုံ GNU / Linux kernel (ခေါ် Vanilla) ကိုအသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည် blobs နည်းသည်။
ကျွန်တော်ဟာအခမဲ့ Hardware လို့ပြောခဲ့တဲ့ Leemote netbook ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းကို leg မှထည့်သွင်းပါက debian သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ညှစ်ပြီးကတည်းကအခမဲ့ kernel ကိုအသုံးပြုသည်။ firmware သည်သီးခြားစီထွက်ရှိပြီး contrib နှင့် free repos တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းထားသော firmware ပါသည့်တရားဝင်မဟုတ်သောစီဒီများလည်းရှိသည်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Parabola ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ခြားနားအောင်အရသာပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
Debian ဟာလုံးလုံးလျားလျား free kernel ကိုအသုံးမပြုပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ Debian Testing ကိုသုံးတာဖြစ်ပြီး installation တစ်ခုစီမှာ network driver များအတွက် blobs အမြဲတမ်းဖန်တီးပေးလို့ပဲ။
ငါလည်း Debian Testing ကိုသုံးတယ်။ သူက blobs မပါဘူး။ သငျသညျ Lenny ကတည်းကသို့မဟုတ်မတိုင်မီစမ်းသပ်အသုံးပြုပါသလား
တကယ်လား သို့ဆိုလျှင် Hard disk ကိုပြောင်းလဲပြီး Windows Vista partition သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါက Parabola GNU / Linux-Libre ကိုကျွန်ုပ်၏ Real PC တွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ (MS Office နှင့်အမြစ်တွယ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်ပါသည်။ ) , Adobe နှင့် CorelDraw မှ Creative Suite) ။
Squeeze ကတည်းက Debian ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​သူကငါ့ရဲ့ network driver တွေအတွက်လည်း blobs တွေအမြဲထည့်ထားတယ်။
သင် firmwares ပါ ၀ င်သောတရားမဝင်စီဒီဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်
Free linux kernel သည် RDRAND ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Intel Secure Key ကုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးမပြုသောကြောင့်၎င်းသည်သာမန်နှင့်အခမဲ့ linux kernel တွင်ပိတ်ထားရမည်။ ' သာမန်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်မစဉ်းစားထားသောကြောင့်၊ NSA နှင့် Intel သည် Intel Secure Key နှင့်အခြားမည်သည့်ကုဒ်ကိုသိသည်တို့နှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်စတင်ခဲ့သည်။
ပါပလော - ဒီကုဒ်ကိုစာရင်းစစ်ဆေးလို့မရတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအတည်မပြုနိုင်ဘူး။ တကယ်တော့, code ကိုတီထွင်သူအင်ဂျင်နီယာက၎င်း၏သန့်ရှင်းမှုကိုကာကွယ်သည်။ ပြနာကခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသက်သေပြလို့မရဘူး။ Ahroa၊ စနိုးဒန်က NSA တပ်ဖွဲ့များ (၎င်း၏နိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေးတရားရုံး) နှင့်သူလျှိုလုပ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်လိုသည် (MS, Google, etc စသည်တို့စသည်ဖြင့်) ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကနောက်ထပ်နှစ်ခု (၂) ခုထပ်ဖြည့်ပါက… Intel တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုမှာလုံးဝဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ Valve သည် binux တွင် steam မှတစ်ဆင့် binaries များကို install လုပ်ခြင်းလော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ linux အတွက်အဆို့ရှင်ကိုကြေငြာတဲ့အခါငါမှာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းကစနိုးဒင်းကသတင်းတောင်မှမရှိခဲ့ဘူး။
Ignacio Agullo Sousa ဟုသူကပြောသည်
ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် Linux kernel သည်အောင်မြင်နေသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော kernel ဖြစ်လာရန် ၁၂ လသာဝေးသေးသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Linus Thorvalds ၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးတွင်ထိရောက်မှုရှိရန်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပရိုဂရမ် (နှေးကွေးသော) သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသော circuit (အမြန်နှုန်း) မှထုတ်လုပ်သောကျပန်းနံပါတ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိသောအခါ၎င်းသည်ရင်းမြစ်များမပါဘဲပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနားမလည်နိုင်လျှင်ပင် Thorvalds သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေးချယ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
Code စစ်ဆေးခြင်းသည် Thorvalds အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအရေးမပါပုံရသည်; အမှန်တကယ်တွင် Linux သည်ယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအရင်းအမြစ်မရှိဘဲအရာဝတ္ထုကုဒ်ထည့်သွင်းထားသည်။ အခမဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦး ဆောင်ပြီးအခမဲ့ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူများ၏တုံ့ပြန်မှုမှာအခမဲ့ Linux ဖြစ်သည်။ သင်ဖြန့်ချိလိုက်သော Linux ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းကိုထိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်သည်။ ဤ debugged Linux Libre ကို အခြေခံ၍ ဖြန့်ချီမှုများစွာရှိသည်။ ဥပမာ Trisquel ။ ယုတ္တိတန်သောအချက်မှာယခု၎င်းတို့သည်ပေါင်းစည်းထားသောဆားကစ်များမှကျပန်းနံပါတ်ထုတ်စက်များသို့ခေါ်ဆိုမှုများကိုသန့်ရှင်းရေးတွင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
Ignacio Agulló Sousa အားပြန်ပြောပါ
“ Stick withanail” ဖြင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်သည် Simpson အမျိုးအစားဂြိုလ်သားများကိုပြanyနာမရှိဘဲမောင်းထုတ်နိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ယခင် "Palo" (သို့မဟုတ် "Palo just") နှင့်မလုပ်နိုင်ပါ။
ယောက်ျားတွေကြည့်ကြရအောင်၊ အဲဒီမှာမိုက်မဲတဲ့အရာတွေဖတ်နေတာကိုရပ်တန့်မလားကြည့်ရအောင်။ သူတို့ကပြီးသားအထက်ကအပေါ်မှတ်ချက်ပေးသည်။ ဤတွင်သူတို့သည်“ စပိန်ဘာသာသို့” ပြန်ဆိုချက်ရှိသည်။ http://www.espaciolinux.com/2013/09/linux-la-nsa-y-la-desinformacion/
ပြီးတော့အခမဲ့ linux လို့ပြောတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာပြောနေတာလဲဆိုတာမသိကြဘူး။ မှတ်ချက်၏ရန်လိုမှုအတွက်တောင်းပန်သည်။ nepomuk သည် spyware ဖြစ်သည်ကိုဖတ်ပြီးသောအခါအစီအစဉ်။ သင်သည်သင်၏ဘောလုံးကိုတံခါးကိုဆန့်ထားလိုသည်
Stephen Restrepo ဟုသူကပြောသည်
Esteban Restrepo အားစာပြန်ပါ
ဆင်းရဲသော taku ဟုသူကပြောသည်
Stallman သည် HURD ကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး GNU သည်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်လိမ့်မည်။
တကယ်တော့သူကသူ့ကိုယ်သူချွတ်ဖုန်စေခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီ Debian စီမံကိန်းနှင့်အတူကစားရန်စတင်အဖြစ်။
သင့်မေးခွန်းအတွက် -“ ၁၀၀% အခမဲ့ဟုဆိုသောဖြန့်ဝေမှုများသည် kernel ၌ဤကဲ့သို့သောအရာများမည်သို့ပါဝင်သနည်း။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကမပါဝင်သည်မဟုတ်လော "
၁၀၀% အခမဲ့ distros များတွင် "linux" kernel မပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းတို့တွင် "Linux-libre" kernel၊ linux kernel ဖြစ်သောအရင်းအမြစ်ကုဒ်မပါ ၀ င်သောဆော့ဖ်ဝဲမပါဝင်ဘဲ၊ လိုင်စင်။
"သင်တကယ် Linus ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုခုမှမိမိကိုမိမိချေးငှားနိုင်ထင်ပါသလား"
ငါ Linus ဘာမှမအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
၎င်းကို disable လုပ်ရန်ခက်ခဲကြောင်း ...
$ zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_HW_RANDOM
# CONFIG_HW_RANDOM ကိုသတ်မှတ်မထားပါ
Linus ရှင်းပြသည်မှာ hardware ရှိရုံမက၎င်းကို kernel configuration တွင်ပါ ၀ င်ပါက system variable အတော်များများ၏ entropy သည်ပေါင်းစပ်ပါ ၀ င်သည်။ random kernel configuration တွင်ပါလျှင်၎င်းကို disable လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှင့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးငါ့ကိုထက်နည်း 10 မိနစ်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
# menuconfig ပါစေ
# modules_install လုပ်ပါ
# mount / boot သည်၎င်းတို့၌သီးခြား / boot အခန်းကန့်ရှိမှသာလိုအပ်သည်
# install လုပ်ပါ
# umount / Boot တက်
သင် ပြန်လည်စတင်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်သည်။
Linus ပြောသည့်အတိုင်းရင်းမြစ်သို့သွားပြီးသင်၏ kernel ရင်းမြစ်များရှိ random.c ဖိုင်တွင်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသာမက၎င်းကိုရောနှောပေါင်းစပ်သည်သာမကလိုင်း ၉၄၈ မှစတင်ကျပန်းဖြစ်သည်။ c ကိုစတင်ရောနှောသည်။
$ gedit /usr/src/linux-3.11.0-gentoo/drivers/char/random.c
* အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိသုကာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာကျပန်းနံပါတ်ရှိလျှင်
အတွက် (i = 0; i <LONGS (EXTRACT_SIZE); i ++) အတွက်
if (! arch_get_random_long (& v))
hash.l [ဈ] ^ = v;
memcpy (အပြင်၊ & hash၊ EXTRACT_SIZE);
memset (& hash, 0, sizeof (hash));
ငါထင်ပါတယ်၊ ဒါကပြaနာလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါ့အပြင် random.c ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့မှတ်ချက်တွေအရ၊ ကျပန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုဖောင့်တစ်ခုတည်းကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာဖုံးကွယ်စရာဘာမှမရှိတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမိရင်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ယခု NSA သို့မဟုတ်စီအိုင်အေကငါ့ကိုဒေတာဘေ့စ်များ၊ ဆာဗာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အထူးပြုလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ကမ်းလှမ်းပါကကျွန်ုပ်၏တက္ကသိုလ်တာ ၀ န်များသို့မဟုတ် Lucho ၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ Feis မှထွက်ခွာ။ အိပ်စက်ခြင်းသို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ PDF များနှင့်အတူပြproblemsနာမရှိပါ။ Zuperación Perzonal ၏ .. uu
David Villa သို့ပြန်သွားပါ
သူတို့က nordrand parameter ကို kernel ကိုဖြတ်ပြီးလည်းပိတ်နိုင်တယ်။
nordrand [X86] RDRAND ၏တိုက်ရိုက်အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပါ
Processor ကို။ RDRAND သည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်
အာကာသ application များ။
Grub ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တယ် -
# nano / etc / default / grub
GRUB_CMDLINE_LINUX = » nordrand »
sair မှထိန်းချုပ်မှု + x ကိုကယ်ဖို့ထိန်းချုပ်မှု + ဏ
ထို့နောက်ပြန်လည်စတင်ပါ၊ သင်လိုချင်လျှင် parameter သည်မည်သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်
grub ၀ င်းဒိုးတွင်တည်းဖြတ်ရန်အီးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးတော့ငါတို့နည်းနည်းထပ်လေ့လာရင်ကော။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကအပြောင်းအလဲတွေ၊ kernel ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတွေအကြောင်းပြောနေတာ။ တစ်ခက်ရင်းခွနှင့်လုပ်ခြင်းသည်အနတ္တမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဖတ်ပါ http://www.espaciolinux.com/2013/09/linux-la-nsa-y-la-desinformacion/
ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တစ်ခုခုဖုံးကွယ်နေသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ MIA ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤလာရန်လိုအပ်သောပါသလဲ ကိရိယာများကိုသိခြင်းနှင့်သူတို့၏အကန့်အသတ်ကိုသိခြင်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေကြောင်းသိရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ငါထင်တာကတော့ကျပန်းကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ ပိုပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊ ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ဘူး။ Facebook, Google နဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်ငါတို့ကိုတကယ်ပဲစူးစမ်းတဲ့သူတွေပေါ့။ လူတွေကသူတို့ရဲ့ဒေတာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလူမှုရေးကွန်ရက်တွေနဲ့ "အခမဲ့!" ကိုပေးတယ် ... ငါသူတို့လည်း "backdoor" linux kernel ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်မထင်ဘူး ... သူတို့ကငါတို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ "တရားဝင်" နဲ့ ...
စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့လူတွေရှိတာအပြင်အပြင်ဘက်မှာလွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကူညီပေးဖို့ (အထူးသဖြင့် FSF က) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့လိုတာကငါထင်တာပဲ။ အမေရိကန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မရရှိပါကဘရာဇီးရှိသူလျှိုလုပ်ငန်းများကိုလူသိများလာသောအခါ Dilma Rousseff မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ပါ။
GNU / Linux လောကမှာဒီသတင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်ကျယ်ပြန့်သောပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတရှိသည့်လူများစွာရှိသည်။ ဒီလိုတံခါးနောက်ကျောရှိတယ်လို့ငါမထင်ဘူး။
edzaconne ယုံကြည်သို့မဟုတ်မအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်းကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်လေးနက်သည် - Linux တွင်အရာဝတ္ထုများကို encrypt လုပ်ပုံ။ ဒါဟာအသစ်သောသတင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်လက်ရှိ / dev / random ၏ထိန်းသိမ်းသူသည်ကျပန်းနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန် Intel License Key ကိုသာအသုံးပြုခြင်း၏တရားဝင်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် intel hardware နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းမပြုနိုင်သောကုဒ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘယ်တော့မှထုတ်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီကုမ္ပဏီအားဖြင့်။ စပိန်ဘာသာတွင်သတင်းအနည်းငယ်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်အင်္ဂလိပ်စာ၌သတင်းစာများတွင် NSA သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဒေတာကိုစာဝှက်ပေးသောအရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲအလုပ်လုပ်ပုံကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ စနိုးဒန်။ ယခုအခါ၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ Intel နှင့်အလွန်ဆင်တူသောသဘောတူညီမှုရှိ၊ မရှိ၊ Linux တွင် cryptography ကိုလျှော့ချရန်အဘယ်ကြောင့်မေးခွန်းထုတ်စရာမဖြစ်သင့်သနည်း။ NSA က၎င်းကိုအတိအလင်းဝန်ခံသည်မဟုတ်လျှင်ရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စနိုးဒင်သည်စစ်မှန်သောစာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်လူသိရှင်ကြားဖြစ်စေသောအရာကိုပင်ငြင်းဆိုလျှင်သူတို့မလုပ်နိုင်ကြပါ။
အဖြေကို Linus ကိုယ်တိုင်အကျဉ်းချုံးထားသည်။
Elav၊ distros အားလုံးသယ်ဆောင်သော kernel သည် binary blobs ဖြင့်လာသည်ကိုသင်မယုံနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်2kernel (Linux Kernel နှင့် Linux-libre Kernel) ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ငါ FSF နှင့်အတူ Debian ဒရာမာတစ်လျှောက်လုံးနေခဲ့ရသည်။ မေးခွန်းကအပြောင်းအလဲမြန်တယ်။
အိုကေ၊ ငါနင်နှလုံးရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်၊ မင်း X မသိဘူးထင်လို့လား! စကားမစပ်၊ Squeeze ကတည်းက Debian သည်အခမဲ့ kernel ကိုအသုံးပြုသည်။
မှန်တယ် .. 😀
၎င်းသည် kernel ဘက်တွင်မဟုတ်ဘဲ hardware ပိုင်းတွင်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ Kernel သည် motherboard embedded TPM chips များ (windows / osx ကဲ့သို့) ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမထိတ်လန့်ခဲ့ပါ။ Intel = NSA ... မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ကြောင့်မှားယွင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၎င်းတို့သည် VIA, Winbond, SiS သို့မဟုတ်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ပိတ်ထားသောချစ်ပ်များ၊ ကျပန်းကျပန်းသည်ဤမျှလောက်ကျပန်းမဟုတ်သကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ NSA ကအတွင်းပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်) ။ ကုန်ပစ္စည်းများပိတ်ထားသရွေ့မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆို၊
ps ။ ၎င်းနှင့်ဆင်တူသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိသော်လည်း linus T အစား၎င်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Microsoft, TPM, NSA နှင့်ဤချစ်ပ်များကိုပြုလုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးဖြစ်သည်။ http://investmentwatchblog.com/leaked-german-government-warns-key-entities-not-to-use-windows-8-links-the-nsa/
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ Linus t သည်ကုဒ်နံပါတ်များတွင်မပါ ၀ င်ပါ၊ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်သည် (သို့) Intel သည်နောက်ကျောတံခါးကိုဖွင့်ရန်လိုလားသည်ကိုမသိပါ။
နောက်ဆုံးမိနစ် - လင်းနပ်သည် RANDR ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက်များကိုထင်ဟပ်သောငါတို့အားလုံးကိုဖုန်းခေါ်သည်
Intel's RANDR ကို "Ingredient" အဖြစ်ရောနှောအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ကျပန်းနံပါတ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နောက်တံခါးရှိလျှင်သော်၎င်း၊ စုစုပေါင်းကျပန်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
နိဂုံး: GNU / Linux သည်အများအားဖြင့်လုံခြုံနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Hand of Thief? နောက်ထပ်ခလုတ်။
ရင်းမြစ် - Linux မဂ္ဂဇင်း
ယခု linux ကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်ခြင်း
«ပြီးခဲ့သည့်မှတ်ချက်များ»ကိုနှိပ်ပါ…မနေ့ကငါ Linus နှင့်စကားပြောခဲ့သည်
ငါယုံမှားသံသယမကင်းဘူး .. .. သူတို့လိုချင်တဲ့မေးခွန်းတွေပဲ .. uff
အဆိုပါ rdrand ၏အဝိဇ္ဇာနည်းတူလိုသောဖြစ်နိုင်သည်။
Fedora ကအရမ်းနှေးနေတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ သတင်းတောင်မှ MSIE လိုသတင်းရလာတယ်။
လုပ်ဖို့ရှိပါတယ် Fedora ။
ငါ့ကိုကောင်းစွာသိသောသူတို့ကိုသာစိတ်ထဲ lol asshole detedisimo ။
zyxx ပါ ဟုသူကပြောသည်
သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကိုတောင်းဆိုသင့်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ပြproblemနာကဒီကမ္ဘာသစ်ကသူတို့ကိုပြောနေခဲ့တာပဲ၊ ဘာလဲ။ သူကျွန်တော့်ကိုသူလျှိုလုပ်ရင်အရေးမကြီးဘူး .. .. ဒါကအရေးမကြီးဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘဝကဒီအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ် .. ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုရူးသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါ .. လုံခြုံရေးမရှိတော့ဘူး၊ ဘာကိုယုံကြည်ရလဲတောင်ခက်တယ်။ မတိုင်မီယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ် .. = (
ဆောင်းပါးကိုဖတ်တဲ့အခါငါတွေးမိတာပဲလေ။ linux ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ငါတို့ဘာတွေစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပြီလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ သွားလျှင်ကျွန်ုပ်ပိုမိုအသုံးပြုသည်မှာ OpenSurce ဖြစ်သော်လည်း၊ ပရိုဂရမ်းမင်းဖိုကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါက၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ လူကြိုက်များတဲ့ပရိုဂရမ်များ Tint2 ကသင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူ။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုသိသည်ကိုပေးပို့သည်ဟုဘယ်သူပြောသနည်း။
ကျနော်တို့မေးခွန်းကိုပုံကြီးချဲ့မထားသင့်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် Elav ပြောသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Flintstones ကဲ့သို့ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်တုတ်ကို အသုံးပြု၍ အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
PS: အကြံပြုချက်။ မှတ်ချက်များကိုအချိန်ကာလနှင့်အမျှနောက်ပြန်ဆုတ်သင့်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ထိပ်ဆုံးတွင်ကျန်နေသောနောက်ဆုံးပေါ်များ၊ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ပြသထားသောသူများအတွင်း၌ရှိသည် (ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ ရှိခဲ့သည်ဟုထင်သည်) ။ နောက်ဆုံးသူများကိုကြည့်ရှုရန်အခြားသူများကိုတင်စရာမလိုပါ။
တုတ်ကိုသုံးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအသံ။ မေးခွန်းတစ်ခု - HTTP GET ညွှန်ကြားချက်ကို spades နဲ့ encode လုပ်ဖို့ဆိုရင် morse code ကိုသုံးရမလားဒါမှမဟုတ် binary ကိုဆက်သုံးလို့ရလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက binary ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါလက်သည်းကိုလေ့ကျင့်နေမလားဆိုတာကြည့်ဖို့လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နောက်တစ်ခုကြားရှိမီလီစက္ကန့် pause ကိုသိဖို့လိုတယ်။ 😀
P.S. ၀ င်းဒိုးမှမှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်စက်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဂေါ်ပြားနှင့်အတူဖမ်းပြီးသွားပေမယ့် Windows ကိုအသုံးပြုရန်အဘို့, အယူမှား! xD
naaah စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ လူတိုင်းသူတို့လိုချင်တာကိုသုံးခွင့်ပြုပါ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာတာလီဘန်တွေမဟုတ်ဘူး
muylinux တွင် NSA သည် privacy နှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းတို့ဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း၎င်းသည်သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အမှိုက်သရိုက်အမှိုက်ကဲ့သို့ထင်ရပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပါက (ပါ ၀ င်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်ပါက) ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းနေသည်။ Linux ကိုအန္တရာယ်ပြုပါက၎င်းကိုမည်သူရေးသားခဲ့သည်၊ မည်သူရေးသားရန်ရည်ရွယ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းပါးနှင့်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၀၀% သေချာသည့်အရာမရှိ။ distros များနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ ၎င်းသည် blabla ထက်သာလွန်သည်။ သူတို့အကောင်းဆုံးလွှမ်းမိုးထားသည့်အရာကို အသုံးပြု၍ သက်တောင့်သက်သာခံစားရသည်။ အချို့ရှုပ်ထွေးသော media distro ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအကြံပြုလိုပါသည် :), BSD :) ကိုသုံးပါ၊ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါလိမ့်မည်။ သက်တမ်းရှည်သော GNU / Linux နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ ။
ဤအရာအလုံးစုံအပေါ် Linux Torvalds တုံ့ပြန်မှု
SM GB +1
ရှင်းလင်းချက်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ Linux သည် "ကျပန်း" နံပါတ်များကိုဖန်တီးရန်ဒေတာများစွာကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာသည်အခွင့်အရေးကိုနားမလည်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ယခုတွင်၎င်းသည် RDRand မှပေးသောဒေတာများကိုလည်းအသုံးပြုသည်။
ရလဒ်ကတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့စာဝှက်စနစ်ဖြစ်တယ်၊ အကယ်လို့ NSA က RDRand ဒေတာကိုသိတယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့ဟာဆော့ဗ်ဝဲစာဝှက်စနစ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ စာဝှက်စနစ်၏ ၁၀၀% ကိုဟာ့ဒ်ဝဲမှထုတ်လုပ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြproblemနာအမှန်ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာပြန်လာပြီး၊ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်သည် kernel တွင်တွေ့ရသည့် "စီးပွားဖြစ်အရာများ" ကိစ္စတွင်လုံးဝမှန်ကန်ပါကကျွန်ုပ်ကြားခဲ့သည့်အတိုင်း "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ freer ပင်" ထင်သည်။ ၎င်းသည်တည်ရှိသည်ထက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆိုင်သောအရာကိုအနည်းငယ်ဖြန့်ဝေရမည်။ ဤသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုအခါငါလေ့လာမှုများနှင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ဥပမာ Trisquel ရှိလျှင်ပြုပြင်ထားသော kernel ဥပမာဖြစ်သည်။ လုံးဝသန့်ရှင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမရှိပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ယာဉ်မောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာအချို့ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အချို့သည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ကြပြီးဥပမာ Ubuntu (တည်နေရာသည် ubuntu အတွက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလှည့်ဖြစ်သည်) ဖြစ်သည်။ ငါ 50/50 အရာနှင့်သီးခြားလွတ်လပ်သောအရာများ၊ စနစ်ကဲ့သို့သောစနစ်သည် Kernel နှင့်စာကြည့်တိုက်နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ Richard stallman သည် GNU တွင်ပုဂ္ဂလိကအရာများပိုင်ဆိုင်ရန်ဤမျှကာလပတ်လုံးမတိုက်ခဲ့သေးသည်ကိုငါသိ၏။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ linus torvalds သည်သူ၏အဖိုးတန်သော kernel ကိုဘယ်တော့မှရောင်းချလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အသေးငယ်သည့်အရာများကိုထည့်ပေါင်းလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ လေးစားပါတယ်
အနည်းငယ်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် NSA အတွက် Intel Troyanice Linux ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကျွန်ုပ်နားလည်ပြီးဝေဖန်မှုမှာ Linus သည်ထိုပိတ်ထားသောကုဒ်၏ "operability" ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို ထပ်မံ၍ မပါဘဲမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် အသုံးပြုသူမှသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာမ ado နှင့်မ။ ငါထင်တာကမစ္စတာမက်ကေးကိုဒေါသထွက်တာကဒါကိုခွင့်ပြုတာပဲ။ ငါထင်တာကတော့ NSA ကိုရည်ညွှန်းတာကဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဖြတ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်။ "Intel ကပြောတာကိုငါတို့မကြည့်ဘဲထားလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့မေးရင် NSA Trojan တစ်ခုထည့်ထားလို့မရဘူး။ ။ "
ပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်သွားရင်အများပြည်သူသိအောင်လုပ်ပြီး Intel နဲ့အတူလှည့်ဖြားလိုက်တာကဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ညီတယ်။ Linus Torval ကဖိအားပေးတာ၊ NSA အတွက်နောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုမိတ်ဆက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာအခုတော့လူတွေကမဆင်ခြင်နိုင်ဘူး။
ငါပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက "ငါ့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်" "free" blah blah blah ကိုပြောပြီးသူက "post it" တောင်မှသူမမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြပြီး "work" ကိုဘယ်လောက်တိတိကျကျဖော်ပြသလဲ၊ ကကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ငါ့အတွက်လာပါ၊ လင်းစ် Olympus မှ Linus ထလာသည်။
သူက "သတင်းစာဘလော့ဂ်ဂါ" ပဲ။ ဒီ site ကလိုချင်စရာများစွာကျန်နေသည်။ ငါရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင့်ရဲ့ browser ကို cookies တွေကိုခြေရာခံတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးပြီးကြော်ငြာတွေအားလုံးကိုဖော်ပြမထားတာကြောင့် site ထဲက cookies နဲ့ data တွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်။
ဒီနေရာမှာဆော့ (ဖ်) ဝဲရဲ့လွတ်လပ်မှုထက်အခြားရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်၊
အကယ်၍ cookie များသည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိကြော်ငြာများမှဖြစ်သည် (ဂူဂဲလ်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွတ်ကီးများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုပင်သိသည်) ။
စကားမစပ်ထိပ်မှာသင်ကသင်၏ cookies များကိုသင့်အတွက်ထည့်ချင်သည်ဖြစ်စေမပေးသည်ကိုအကြံပြုသည်။
နှင့်စကားမစပ်, ဒီမှာဆောင်းပါး၏တူညီသောစာရေးဆရာဒုတိယယူပြီး။ ဒီနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းတက်ရှင်းလင်းရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း http://www.muylinux.com/2013/09/10/puerta-trasera-nsa-linux-2/ Linus Trovals ၏ပြောကြားချက်အရ << and links (သူ့ကိုယ်သူဘာသာပြန်ခြင်း၏ဇိမ်ခံကားများအပြင်) link များ။
nsational shit agency က Linux ကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဇွန်လမှာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။
အခမဲ့မီးစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာပါပြီ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အာမဂေဒုန်ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး၊ အရင်းအမြစ်၏အားသာချက်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားသည်။
ဒါပေမယ့် Linux ကိုသူလျှိုလုပ်တာဟာသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲစီးပွားဖြစ်အတွက်သာဖြစ်သည်။
* flase လိင်တူချစ်သူကစားသမား
ပြီးတော့မင်းဝိုင်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာက "ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာဝိုင်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး Linux ထဲမကျဘူး"
လိင်တူချစ်သူ flase သို့မဟုတ် Spype မပါဘဲငါတို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်!
အမှန်တရားကတော့ဒီပြissueနာဟာကျွန်တော့်အတွက်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူး၊ ဒီလူရဲ့အဆိုအရ၊ kernel ထဲမှာ၊ Microsoft နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပရိုဂရမ်လိုင်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်၊ အဲဒီလိုမြင်ရင်သင်မြင်နိုင်မလား။ လိုင်းများတွင်နောက်ကျောတံခါးရှိမရှိသင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ ၎င်းကို kernel မှရှင်းလင်းနိုင်ပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က programming line တွေဖြစ်ခဲ့ရင် back door / s တွေရှိရင်တော့သူတို့ကို kernel maintainer ကဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ်။
Matias Linares placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီအကြောင်းဖတ်ပြီးပါပြီနှင့်အမြင်တစ်ချက်ကနေကောင်းပါတယ် (က software ထက်ဟာ့ဒ်ဝဲကနေကျပန်းနံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အများကြီးပိုပြီးထိရောက်သည်) ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသော။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၎င်းအားပိတ်ထားရန်နည်းလမ်းရှိပါသည်။ parameter တစ်ခုကို kernel boot သို့သာသွားရမည်
Matias Linares အားပြန်ပြောပါ
ငါမှတ်ချက်ပေးပြီးသားအများအပြားနှင့်အတူသဘောတူ, ဤအချက်အလက်များအမှိုက်သရိုက်, တိကျစွာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ငါဘယ်သူမှအရာအားလုံးကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ငါသငျသညျနက်ရှိုင်းစွာဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု, သင် kernel ကုဒ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လိုသိသောလူကိုချဉ်းကပ်, စာရေးဆရာတစ် ဦး မဟုတ် muylinux -.- (သင်က XD ကင်ဆာရှိတယ်လို့ထင်ရင်ကုသသူဆီချဉ်းကပ်သလိုမျိုး) ။
ဒီတော့… FreeBSD ကိုသွားကြည့်ရအောင်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပြlinနာကတော့ SElinux ဟာ 2.3 KP ကတည်းက Linux Kernel ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်။
ဖုတ်ထား! 7000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီး!
NSA / Illuminati ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲ OS အသစ်တစ်ခုလုပ်ရန်အချိန်ကျပြီ။
ငါဘယ်လိုပရိုဂရမ်သွင်းမယ်၊ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင် OS တစ်ခုလုပ်မယ်၊
ဒါပေမယ့် ... ဒါကဘာကိုအရေးပါသလဲ အစွန်းရောက် router များအားလုံး NSA (illuminati / Zionist / Masona) မှရိုက်ထုတ်ပြီးပြီလား။ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့: NSA ကသင်တို့ကို Fuck !!!
Frank Black သို့ပြန်သွားပါ
တပ်ဆင်ခြင်းမှတ်တမ်း - Slackware၊ နောက်ဆုံးအဆင့်များနှင့်အခြားကိရိယာများ
စမ်းသပ်မှု - GTK အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးမပြုဘဲနေထိုင်ခြင်း